INkulumbuso yaseSaskatchewan, iNkokheli ye-NDP kunye noPolonical Political
Umntu omncinci onobuntu obukhulu, uTommy Douglas wayenobungqineli, onobuqili, onobukroti nomnene. Inkokeli yokuqala kurhulumente wezentlalo kwiNyakatho Melika, uDouglas waletha utshintsho olukhulu kwiphondo laseSaskatchewan waza wahola indlela yokuguqulwa kweentlalo ezininzi kwilizwe lonke laseKhanada. U-Douglas uthathwa ngokuba nguCanada "uyise weyeza." Ngomnyaka we-1947 uDouglas wenza i-Universal hospital hospital eSaskatchewan kwaye ngo-1959 wachaza isicwangciso seMedare saseSaskatchewan.
Nazi ezinye iinkqubela malunga noPhoglas njengomsebenzi wezepolitiki waseCanada.
1944 ukuya ku-1961
Inkokheli ye-Federal New Democratic Party
1961 ukuya ku-1971
Amaphukula ephambili emisebenzi kaTommy Douglas
UDouglas wazisa izibhedlele zaseSaskatchewan ngo-1949 kunye nesicwangciso seMedare saseSaskatchewan ngo-1959. Nangona inkulumbuso yaseSaskatchewan, uDoulas kunye noorhulumente wakhe bakha amaqumrhu amaninzi karhulumente, abizwa ngokuba yiCrown Corporations, kuquka ukusekwa kweendlela zomoya kunye nebhasi, iSaskPower kunye SaskTel. Yena kunye ne-Saskatchewan CCF bajongene nophuhliso lwezentlalo ezanciphise ukuxhomekeka kwephondo kwizolimo, kwaye bazisa ne-inshurensi yokuqala ye-automobile ye-Canada eCanada.
UDoulas wazalwa ngo-Oktobha 20, 1904 eFalkirk, Scotland. Intsapho yafudukela eWinnipeg , eManitoba ngowe-1910. Babuyela eGlasgow ngexesha leMfazwe Yehlabathi I, kodwa babuyela ku-Winnipeg ngo-1919.
UDoulas wafa ngumhlaza kaFebhu.
24, 1986 e-Ottawa, e-Ontario .
UDoulas wathola i-bachelor degree in 1930 ukusuka kwiKholeji yaseBrandon eManitoba . Emva koko wazuza i-degree ye master in sociology ngo-1933 kwi-University of McMaster e-Ontario.
UDoulas waqala umsebenzi wakhe njengomfundisi wabhaptizi. Wathuthela e-Weyburn, eSaskatchewan emva kokumiswa ngo-1930.
Ngethuba lokuPhukisa okukhulu, wajoyina i-Co-Operative Federation of Commonwealth Federation (CCF), kwaye ngowe-1935, wanyulwa kwiNdlu yeeNgingqi.
Wayelungu leCCF ukususela ngo-1935 ukuya ku-1961. Waba yinkokheli yeSaskatchewan CCF ngo-1942. I-CCF yachithwa ngo-1961 kwaye yaphumelela yi-New Democratic Party (NDP). UDoulas wayilungu le-NDP ukususela ngo-1961 ukuya ku-1979.
Umsebenzi wezopolitiko kaTommy Douglas
UDouglas waqala ukuya kwizopolitiko ezisebenzayo kunye noMbutho wezeMisebenzi ozimeleyo waza waba nguMongameli we-Weyburn Independent Labor Party ngo-1932. Wagijima okokuqala ngo-1934 ukhetho oluqhelekileyo lwe-Saskatchewan njengoMgqatswa-wezeMpilo, kodwa wahlulwa. UDouglas wanyulwa kuqala kwiNdlu yeMimoni xa egijimela e-Weyburn kwiCCF kwi- electoral general election of 1935.
Ngoxa wayeyilungu lepalamente, uDouglas wakhethwa ngumongameli we-CCF wesifundazwe sase-Saskatchewan ngowe-1940 waza wonyulwa umphathi weCCF yephondo ngo-1942. UDouglas washiya isikhundla sakhe sokubambisa ukuba asebenze ukhetho lukaSaskatchewan jikelele luka-1944. Wahola iSaskatchewan I-CCF ukuphumelela okukhulu, ukufumana amahlalo angama-47 kwezi-53. Yayiyinkokheli yokuqala yentando yeninzi yentando yenkululeko eyayikhethwe eNyakatho Melika.
UDouglas ufungelwe njengeNkulumbuso waseSaskatchewan ngowe-1944. Wabamba i-ofisi iminyaka eyi-17, ebudeni apho wayenguvulindlela obunzulu bokuhlaziywa kwentlalo kunye noqoqosho.
Ngo-1961, uDouglas washiya isikhundla sokuba iNkulumbuso yaseSaskatchewan iholele iNational Democratic Party, eyakha njengobambiswano phakathi kweCCF kunye neCanada Labor Labor. UDouglas wanqotshwa kwi-electoral federation ka-1962 xa egijimela e-Rigina City ngokubakho ngenxa yokuhlaselwa kwenkqubo kaRhulumente waseSaskatchewan. Kamva ngowe-1962, uTommy Douglas wamphatha isihlalo kwisibhankqalazi saseBrithani saseBurnaby-Coquitlam ngonyulo.
Ukuxhatshazwa ngo-1968, uDoulas wathatha umkhonto weNanaimo-Cowichan-IIqithi ngowe-1969 waza wambamba waze wahlala phantsi. Ngowe-1970, wazimelana nokuphunyezwa kweMithetho yoLwa kweMfazwe ngo-Oktobha.
Kwathintele kakhulu ukuthandwa kwakhe.
UDouglas wehla njengenkokheli yeNew Democratic Party ngo-1971. Wayelandelwa nguDavid Lewis njengomholi we-NDP. UPouglas wathatha inxaxheba ye-NDP umgxeka amandla wamandla de wahlala phantsi kwezopolitiko ngowe-1979.